हरेक दिन विज्ञान हामीलाई, नयाँ अज्ञात र कहिलेकाहीं अनौठो र inexplicable कुरा प्रकट गर्छ। अब सम्म, प्रकृति मानिसजातिको रहस्यहरुलाई धेरै प्रदान गर्दछ। पुस्तक अनातोली Chernyaev - प्रसिद्ध स्लाव भाषाहरु विद्वान र दार्शनिक - तिनीहरूलाई धेरै व्याख्या।
आफ्नो काम मा उहाँले परिकल्पना अगाडि राख्दछ र प्रकृति को धेरै रहस्य प्रकट गर्छ। आफ्नो लेखोटहरू eyewitnesses, वैज्ञानिक व्याख्या र अनुसन्धान गर्न साबित भयो। पुस्तक पेशेवरहरुको लागि मात्र होइन तर नयाँ विभाग आधारमा आजको संसारमा लाग्छ इच्छुक निम्ति रोचक र सूचनात्मक छन्।
Chernyaev Anatoliy Fedorovich: जीवनी
अनातोली Fedorovich Kuibyshev Chernyaev शहर मा 1937 मा जन्म भएको थियो। उहाँले पेन्जा मा सिभिल इन्जिनियरिङ संस्थान र ग्रामीण निर्माण को लागि स्नातकोत्तर CNIIEP स्नातक। लामो समय को लागि उहाँले एक निर्माण कम्पनी मा मुख्य इन्जिनियर रूपमा फोरमैन रूपमा काम र त्यसपछि। उहाँले स्नातक स्कूल स्नातक जहाँ एउटै अनुसन्धान संस्थान, मा, त्यो पार्टी समिति को एक शोधकर्ता र सचिव भएको छ। सञ्चालन सेमिनार, वैज्ञानिक र शैक्षिक संस्थाहरू मा भाषण। म Kirov शहर मा परिवार सम्पत्ति को एकेडेमी मा हालै सिकाउनुभयो।
अक्टोबर 2, 2013, अनातोली Chernyaev Obninsk क्यान्सर केन्द्र को शहर मा मृत्यु - ट्यूमर हटाउन सर्जरी खडा गर्न सकेन। तर यो उल्लेखनीय मानिस, एक वैज्ञानिक र शिक्षाविद् धेरै काम छोडेर, जानकारी सबै समय मा सान्दर्भिक रहन्छ कि। आफ्नो अनुसन्धान कार्य मेकानिक्स र गुरुत्वाकर्षण को क्षेत्र समेट्छ। उहाँले सिद्धान्त मा आवासीय घरहरू निर्माण को आविष्कार हो सुनको खण्ड पुरातन fathoms संग।
प्रणाली fathoms को विशिष्टताको
यो अगाडि राख्नु जो र substantiated अनातोली Chernyaev उल्लेखनीय सिद्धान्त छ यसलाई मापन एक मानक एकाइ अभाव छ। प्रणाली पनि Euclidean छैन। यो कस्तो अर्थ राख्छ? शताब्दीयौंदेखि, वर्दी स्तर को कमी, मात्र छाडेनन्, तर पनि यसको वैभवशाली देखि कम थिएन कि सुविधाहरु को समानुपातिक प्रकृति को निर्माण गर्न योगदान।
आफ्नो पुस्तक "स्वर्ण fathoms" मा अनातोली Chernyaev, आफ्नो संस्करण वर्णन अगाडि राख्न प्रमाण को सिद्धान्त fathoms मा निर्मित घरहरू बस्ने ती को गवाही दिन्छ। उहाँले तर्क छ मापन को स्वीकार एकाइ कि - मीटर - एक कृत्रिम एक। यो मानक, एक सीधा लाइन खेल्छ जो। तर यो सीधा व्यक्तिसँग जोडिएको छ छैन र संसारको अनुरूप प्रतिबिम्बित गर्दैन।
Chernyaev कि छ, संरचना यसको आकार को दृश्य मा डिजाइन गरिएको छ सुनको मास्टर को अनुपात, मा घरहरू निर्माण गर्न प्रदान गर्दछ। बाह्य आयाम होस्ट को आकार अनुसार हिसाब गरिन्छ, आन्तरिक - को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री को। यो त्यहाँ एक निश्चित अर्थमा छ - परिवार, पुरुष र महिला को भूमिका प्रतिबिम्बित। साथै, यो कोठा मा नकारात्मक क्षेत्र neutralize र मालिकहरूको राम्ररी जा सुधार गर्न आवश्यक छ।
एउटै बिल्कुल कुनै मान्छे छ रूपमा फलस्वरूप, आकार र डिजाइन को मामला मा एक अद्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुपर्छ। वरपरको ठाउँ मानव को अनुरूप - यो attunement एक प्रकारको आउँछ। तसर्थ, यो आफ्नो काम Chernyaev Anatoliy Fedorovich व्याख्या रूपमा, एक सुरिलो व्यक्ति, रचनात्मकता र विश्राम लागि ठाउँ "जीवित" सिर्जना।
पुस्तक: मूल र अनपेक्षित
अनातोली Fedorovich Chernyaev धेरै पुस्तकहरु र लेख को लेखक हो। यसको नवीन दृष्टिकोण, अनपेक्षित रुप र नयाँ विचार उहाँले यस्तो काम मा विस्तृत वर्णन जसमा:
2 मात्रा मा रूसी संयन्त्र "«।
"ठाउँ को dialectic।"
"पुरातन रस को गोल्ड '।
"आधारभूत रूसी ज्यामिति।"
"के मौसम संग मा जा गर्नुपर्छ?"।
"द पत्थर आकाशतिर गिरावट।"
"Khafre को पिरामिड को रहस्य।"
अक्सर उहाँले राजनीतिक विषयहरू मा memoirs संग जम्मा गरिएको छ। तर यो मामला छैन। आफ्नो मेहनत र प्रकृति र मानिसको, Astronomical समस्या सद्भाव को अध्ययन अनातोली Fedorovich समर्पित। उहाँले मानिसहरूलाई तिनीहरूको अन्तरक्रिया को प्रकृति मा, ग्रह, तारा, आकाशगंगाओं प्रभाव अध्ययन। Chernyaev Anatoliy Sergeevich - आर्थिक र राजनीतिक विषयवस्तुहरू पूर्ण बिभिन्न व्यक्ति मा पुस्तकहरु र लेख को लेखक।
पत्रिका मा लेख
, लेख को एक श्रृंखला "गिजा को पिरामिड बारेमा थोडा"।
"को Tunguska घटनाको अध्ययन गर्न नयाँ।"
"द गुरुत्वाकर्षण र विरोधी गुरुत्वाकर्षण।"
"को सौर्य प्रणाली को गुरुत्वाकर्षण लेन्स।"
"शरीर को नयाँ आकर्षण।"
"एउटा क्रोधित भन्नु।"
नयाँ मेकानिक्स र ज्यामिति
Chernyaev Anatoliy Fedorovich नयाँ ज्यामिति र मेकानिक्स सिर्जना गर्न आए रूपमा? उहाँले अक्सर एक पटक वैज्ञानिकहरु बर्मुडा त्रिभुज बारेमा भन्न लगभग केही छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान आकर्षित कि सम्झे। यो प्रश्नको जवाफ निर्णय भएको, यो भौतिक मा उपयोगी, कुनै जवाफ फेला, म ज्ञात थियो dialectics, को दृश्य को बिन्दुबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास हो, र।
यो विषय केलाएर, यो समय को ज्यामिति परिचय प्रस्तावित छ। को पाठ्यक्रम, भौतिक र गणित सबै यो असम्भव छ भनेर थाह छ। परीक्षण र त्रुटि मार्फत, उहाँले सबै आन्दोलनहरु गतिशील छन् कि निष्कर्षमा आए। भौतिक र रूसी ज्यामिति - त्यसैले उहाँले दुई ब्रान्ड नयाँ विषय खुलेको छ।
पत्थर आकाश फस्न
अनातोली Chernyaev एक समय भित्र गर्न चेल्याबिन्स्क meteorite को गिरावट भविष्यवाणी। आफ्नो काम अध्ययन र अध्ययन फेरि छन्। उहाँलाई द्वारा सिर्जना, वास्तवमा, अर्थोडक्स सिद्धान्त, आधुनिक संसारमा रुचि चासो जगायो, र आफ्नो विचार र अनुमानको थुप्रै पुष्टि गरेका थिए।
विशेष मा, आफ्नो काम meteorites को अध्ययन गर्न समर्पित आफ्नो प्रस्तुतिहरु, धेरै आधुनिक वैज्ञानिकहरूले मा ल्याउन। तिनीहरूले convincingly स्थलीय मूल को परिकल्पना substantiated पुष्टि भएको Tunguska meteorite को। आफ्नो धेरै काम, तथ्यहरू र तर्क inexorably हामीलाई नजिक सत्य गर्न ल्याउन, Chernyaev द्वारा मा भरोसा।
सार "Mumu" को सार व्यक्त गर्दैन
रोचक विचार र कार्यशालाओं: कसरी आफ्नै हातले हिरन बनाउन
Cranberries देखि Kissel। लागि नुस्खा
तपाईं एक क्रिसमस ट्री अभिजात वर्ग किन्न गर्नुपर्छ?
नोटबुक समीक्षा एसस X55VD: आधारभूत विशेषताहरु